ဟိုက် ရှားပါး! ရင်ခုန်စရာအိုက်တင် မျိုးစုံဖြင့် ချစ်စဖွယ်ကောင်းသော အမူအယာ လေးနဲ့ အလန်းလေး လုပ်ပြလိုက်တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ဗီဒီယို – Cele Oscar
ဟိုက် ရှားပါး! ရင်ခုန်စရာအိုက်တင် မျိုးစုံဖြင့် ချစ်စဖွယ်ကောင်းသော အမူအယာ လေးနဲ့ အလန်းလေး လုပ်ပြလိုက်တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ဗီဒီယို
မင်းသမီး ချောလေး ဖူးပွင့်သခင် က တော့ အနုပညာ လောက မှာ နေရာ တစ်ခုကို ရယူထား နိုင်ခဲ့ ပြီး အထာ ကျကျ ဆော့ကစား ထား တဲ့ အမိုက် စား Tiktok လေးတွေ ကို ပရိသတ် တွေ ရှေ့ ချ ပြလေ့ ရှိ ပါတယ်ခင်ဗျ။
ချစ်စရာ ကောင်း တဲ့ အပြုံးလေး တွေ ကို ပိုင် ဆိုင် ထား နိုင်ခဲ့ တဲ့ သူမ က တော့ ကြော်ငြာ တွေကို လည်း ရိုက် ကူးလျက် ရှိနေ ခဲ့တဲ့ အနု ပညာ ရှင် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်ဗျ။သူမ က တော့ ကြွေလောက် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေး တွေ ကိုလူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက် တင်ပေးလေ့ ရှိပါ တယ်ခင်ဗျ။
သူမ က တော့ ယခုမှာ အလန်းစား ဖက်ရှင် ကြောင့် ဆွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ ကိုယ်လုံး လေး ပေါ်လွင် နေပြီး အထာ ကျကျ post ပေးကာ မိမိုက်လွန်းတဲ့ပုံများ ကို ချပြလာခဲ့ ပါ တယ်ဗျ။ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ ဆော့ကစား ထား တဲ့ သူမရဲ့ ပုံလေး တွေ က အချစ် တွေ ပိုစေခဲ့ တာ ပဲဖြစ် ပါ တယ်ခင်ဗျ။ ချစ် ပရိသတ်တွေ အ တွက် မင်းသမီး ချောလေး ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ အသည်း ယား စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ဗီဒီယိုလေး တကို ပြန် လည် ဖော်ပြပေး လိုက်ရ ပါ တယ် ခင်ဗျ။
source : Phoo Pwint Tha Khin ’ s fb acc
မငျးသမီး ခြောလေး ဖူးပှငျ့သခငျ က တော့ အနုပညာ လောက မှာ နရော တဈခုကို ရယူထား နိုငျခဲ့ ပွီး အထာ ကကြ ဆော့ကစား ထား တဲ့ အမိုကျ စား Tiktok လေးတှေ ကို ပရိသတျ တှေ ရှေ့ ခြ ပွလေ့ ရှိ ပါတယျခငျဗြ။
ခဈြစရာ ကောငျး တဲ့ အပွုံးလေး တှေ ကို ပိုငျ ဆိုငျ ထား နိုငျခဲ့ တဲ့ သူမ က တော့ ကွျောငွာ တှကေို လညျး ရိုကျ ကူးလကျြ ရှိနေ ခဲ့တဲ့ အနု ပညာ ရှငျ တဈယောကျ ပဲ ဖွဈ ပါ တယျဗြ။သူမ က တော့ ကွှလေောကျ စရာ ကောငျးလှနျး တဲ့ အလနျးစား ပုံရိပျလေး တှေ ကိုလူမှု ကှနျယကျ စာမကျြနှာ ထကျ တငျပေးလေ့ ရှိပါ တယျခငျဗြ။
သူမ က တော့ ယခုမှာ အလနျးစား ဖကျရှငျ ကွောငျ့ ဆှဲဆောငျ မှု ရှိတဲ့ ကိုယျလုံး လေး ပျေါလှငျ နပွေီး အထာ ကကြ post ပေးကာ မိမိုကျလှနျးတဲ့ပုံမြား ကို ခပြွလာခဲ့ ပါ တယျဗြ။ခဈြစရာ ကောငျးတဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ ဆော့ကစား ထား တဲ့ သူမရဲ့ ပုံလေး တှေ က အခဈြ တှေ ပိုစခေဲ့ တာ ပဲဖွဈ ပါ တယျခငျဗြ။ ခဈြ ပရိသတျတှေ အ တှကျ မငျးသမီး ခြောလေး ဖူးပှငျ့သခငျ ရဲ့ အသညျး ယား စရာ ကောငျးလှနျး တဲ့ ဗီဒီယိုလေး တကို ပွနျ လညျ ဖျောပွပေး လိုကျရ ပါ တယျ ခငျဗြ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးနုသားနု ဖြစ်နေချိန်မှာ Idol အဆိုတော်ကြီးနှစ်ဦးရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကို ကြည့်ပြီး ရယ်လိုက် ၊ ငိုလိုက် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ မြတ်ရတနာကျော်
WOOL! ကောက်ကြောင်းအလှပေါ်လွင် အောင် မိလွန်းနေတဲ့ ချောကလျာ ရဲ့အလန်းစားပုံများ